iPhone 6 | IPhone nhau
iPhone 6, zvese zvataida, zvakakura uye zvine simba. Iyo yakatetepa yakatombogadzirwa paingova 0,69cm, futi ane simba kwazvo. 4,7-inch Retina HD inoratidzira ine resolution ye1334 × 750 pixels. Iye zvino zvinouya nehama yakura, iyo iPhone 6 Plus, iine maficha akafanana asi 5,5-inch screen pane 4,7.
Un nyowani yakatenderera dhizaini, iine sikirini yakatenderedzwa zvishoma kumativi, nzira nyowani yekumisikidza antennas zvisati zvamboitika, uye ese aine matatu mavara ayo akabudirira kwazvo mushanduro dzakapfuura, grey grey, sirivheri negoridhe.
Mukati mekuvakwa kwayo kwema-64-bit, a nyowani A8 processor ichiperekedzwa neM8 yekufambisa koprocessor. Zvese zvekugadzira mudziyo kusvika makumi mashanu ane simba kupfuura iyo yekutanga iPhone.
Kamera yake haina kuvandudza zvakanyanya mumifananidzo, inochengetedza iyo 8MP asi inovandudza iyo Focus Pixel sensor; ndizvo muvhidhiyo kwaanopa chinyorwa ine 1080p vhidhiyo uye inosvika ku240fps mune inononoka kufamba kurekodha.
Zvese ndizvo nekukurumidza, zvese zviri nani. Kubatana, WiFi kumhanya, dhata, Kubata ID, nharembozha, NFC, itsva barometric sensor ... uye zvese inofambidzana neIOS 8, inonyanya kufambisa nharembozha yekushandisa kusvika zvino.
Iyo iPhone 6 ichauya nayo matatu ekugona sarudzo, 16GB ye699 euros, isu tobva tasvetukira ku64GB ye799 euros uye pakupedzisira 128GB ye899 euros.
Dzazvino nhau pane iyo iPhone 6
Tsvaga ese matsva nhau nezve nyowani 6-inch iPhone 4,7.
Boka FaceTime kufona hakushande pane ese iOS 12 inoenderana iPhones uye iPads
Mazuva mashoma apfuura, Apple yakaburitsa iOS 12.1, iyo yekuvandudza iyo yakatipa isu kugona kuita mafoni senge chikuru hunyanzvi ...
Tora yakagadziridzwa 128GB iPhone isingasviki € 200
kubudikidza louis padilla inoita 4 makore .
Iwo maPhones matsva ari pano, uye vanosvika nemitengo inodarika € 1000, uye unofanirwa kuva ...
kubudikidza Carmen rodriguez inoita 5 makore .
Isu tese tinoziva matambudziko ari kupi iyo nyowani iOS 8 uye isu tinomirira iyo yekuvandudza senge May mvura, asi ...
Iyo 'nyowani' 6GB iPhone 32 yadzoka pakutengesa kuAsia
Mune ino kesi isu tiri kutarisana neimwe nyaya isinganzwisisike uye zvimwe kana isu tichifunga nezve kuti iyo catalog ye ...
iOS 10.3 Beta 1 vs iOS 10.2.1, kumhanya uye kuyedza bvunzo
Muvhiki rese ratiri kuda kupera, vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa vhezheni yacho ...
Runyerekupe: iPhone 6s bhatiri kutsiva chirongwa chinouya kune iPhone 6
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Apple Insider inoti yakataura naApple uye kuti avo vari muCupertino varamba runyerekupe urwu. TO…
Iyo kirasi yekuita mhosva pamusoro peiyo iPhone 6 skrini dambudziko rinounganidza kukurumidza
Nguva pfupi yapfuura iyo iPhone 6 yatanga kutengeswa zvakaonekwa kuti yakapetwa neimwe "nyore" ...
Vhidhiyo yeiyo itsva 4-inch iPhone inoonekwa. iPhone 6c: Ndiwe here?
Kwave kutove nezvakawanda, ndingati zvisingaverengeki, runyerekupe neruzivo izvo zvakatiudza nezve 4-inch iPhone…
kubudikidza Paul Aparicio inoita 7 makore .
Runyerekupe zuva. Kana imwe nguva yapfuura tanga tichitaura nezverunyerekupe rwunotiudza zvakare nezve inopikisa iPhone ...
Unboxing iyo iPhone 6 Smart Bhatiri Nyaya
kubudikidza Ignatius Room inoita 7 makore .
Kupesana nematambudziko ese uye pasina chero runyerekupe rwemberi, Apple yakatishamisa isu Chipiri chapfuura nekutanga kwe ...
Nyowani runyerekupe runoti "iPhone 6c" ichasvika muchirimo
Zvakawanda uye zvakasiyana kwazvo ndidzo runyerekupe dzinotaura nezve iPhone 6c, asi aya makuhwa ane poindi imwe chete mu ...